June | 2015 | HimiloNetwork
Zakariya June 14, 2015	Leave a comment 227 Views
Qeybtii ugu danbeysay ee saddexaad; Muqdisho (Himilonews) – Iyada ahaan, waxay lumisay inay iska caabiso ninkan. “Wuu i salsalaaxay, durbana waxaan lumiyay dareensidahaygii. Waxaan bilaabay inaan daba-kaco. Isaga unbay ahayd, qof kale lama uusan soconin. Waa gaban dhalin-yar oo u dhaxeeya 24-25. Wuxuu ii sheegay in isaga iyo waalidkiisa ay ku nool yihiin dhismahan qabyada ah.” Waxay sharaxday in abbaaruhu ...
Zakariya June 14, 2015	Leave a comment 175 Views
Lagos, Nigeria (HIMIMLONEWS) – Agbaazue, maalintaas dhakafaarka leh. Waxay u labisatay la kulanka Micheal. Falanqeynta wixii ku dhacay, gabadhan yari waxay hoosta-ka-xariiqday inay wicid ka heshay telifoonkeeda. “Moobilkayga ayaa soo dhacay, nin ayaana rabay inuu ila hadlo. Ma ogi siduu ku helay numberkayga. Hayeeshe, wuxuu ii sheegay magaciisa in Micheal la yiraahdo mise ahayn mid kamid ah Micheal-ladii aan garan ...
Zakariya June 14, 2015	Leave a comment 269 Views
Muqdisho (Himilonews) – Sida la ogyahay, laf-dhabarta dhaqaalaha dalku waa xoolaha nool. Biyo iyo baad ayay ayay xooluhu u baahan yihiin. Haddii kale wey le’anayaan oo anfac ma yeeshaan. Ugaartu dadka iyo dalkaba waxtar weyn ayay u leedahay; hilibkeedaa la cunaa, saanteedana siyaabo badan ayaa loo manaafacadsadaa. Dalxiiska ka yimaadda dhulka shisheeyaha ah ayaa noo daawasho yimaada. Ugaarteennu lacag adag ...
Zakariya June 14, 2015	Leave a comment 274 Views
Zakariya June 14, 2015	Leave a comment 263 Views
Qeybtii ugu danbeysay ee saddexaad; Muqdisho (Himilonews) – Caruurta reer Kashmiir waxay ku koreen daawashada xabaalo-wadareedyada lagula kaco dadkooda. Marka qof la xabaalaba, bulshadu qalbigay ku qabtaan mahadhadiisa. Taariikh werintu waa hubka ugu weyn ee ay dadka reer Kashmiir kaga hor tagaan qarqarsiga qur-goynta ah ee dowlada Hindiya. Xittaa ku-hoos-noolnimada gumeysiga Hindiya, sheekooyinka dad dhintay lama aamusin karo. Qoysaska dadka ...
Zakariya June 13, 2015	Leave a comment 232 Views
Zakariya June 13, 2015	Leave a comment 239 Views
qeybtii koobaad; Muqdisho (Himilonews) – Ka digtoonaada qofka aad saaxiib uga dhiganaysaan codsiga uu kuusoo dhigo Facebook-giina. Tani waa waano kaaga imaanaysa 17—jirad Ada Nba Agbaazue, taas oo ka baxsatay jaceyl-ku-qaraabte ay Facebook-ga ku baratay kaas oo isku rogay inuu u dilo aargoosi dhaqameed kadib kol uu sareer kula lulmooday dhismo-dabaq qabyo ah oo ku yaalla gudaha Abule-Ajanloco, Lagos. Agbaazue, ...
Zakariya June 13, 2015	Leave a comment 391 Views
Waa mar kale iyo Barnaamij aan ugu tala-galnay inaan ku kobcino garaadka bulshada iyo inaan ku hoga-tusaaleyno hadba dheelliga qofka bani’aadamka ku sugan innaga oo tusaalayaal iyo murtiyo waaya’aragaysan kusoo gudbin doonna. Hababa, xaq-dhowrka meertadan Kobci Maskaxdaada waxaan hadba in kasoo garoocanaynaa buugga Hano Noloshaada oo uu qoray Zakariya Hassan oo dhawaan suuqa-imaan doonaa. 1. Wax kasta oo aan garanayo waxaan ...
Zakariya June 13, 2015	Leave a comment 227 Views
Washington, USA (Himilonews) – Ku aroorista riyo-caruureedkeedii ahayd inay noqoto Wariye, haweeneyda Muslimadda Maraykanka ah waxay naawilaysaa noqoshada gabadhadii ugu horreysay ee Fogaan-aragga kaga soo muuqata iyada oo xiran Xijaab. “Waxaan ku barbaaray ogaanshaha inaan doonayo noqoshada Saxafiyad…sal ahaanna waxaa ahaa sheeko tebiso,” Saxafiyada Muslimadda ah ayaa ku sheegtay muuqaal ay Jimcihii soo kax-bixisay Huffington Post, April 10. “Waligay maan ...
Zakariya June 13, 2015	Leave a comment 206 Views
qeybtii labaad; Dhibta ugu weyn ee deegaanka lagu hayo ma ahan sida loogu waashay dabarjaristeeda. Waa aqoon darrida ku wajahan fahamka guud ee deegaaanka. Dallaawaha mustaqbalka ma ahan midka misaarta u sita iyo midka wax-yeelaya dhirteenna. Waa midka aan aqoon waxa deegaanku ugu fadhiyo. Hadaba, deegaanka oo ah goob kulmisa nool iyo moodba, waxaa ku sugan waxtar badan oo aan ...